Yini upcycling nokuthi isiza kanjani imvelo | Bezzia
Kuyini ukukhuphuka kwebhayisikili
USusana Garcia | 17/04/2021 10:00 | Indlela yokuphila
Senza imfucuza eminingi ngokwengeziwe ngakho-ke kunzima kakhulu ukuthi imvelo ingathinteki. Siye sabona ukuthi ukusetshenziswa kakhulu kwabathengi kusiholela ekukhiqizeni amathani kadoti minyaka yonke. Ngakho-ke, ukwenza kabusha kabusha kabusha kuye kwaba yindawo esemqoka yokwehlisa lokhu kwanda kukadoti. I- upcycling umkhuba ofanele ogxile ekusebenziseni kabusha nokwenza ngcono lokho osunakho kakade.
El i-upcycling yaziwa nangokuthi i-upcycling. Leli gama lisitshela ukuthi ukuphinda kusetshenziswe kabusha kwakhiwa ukudala okuthile okubalulekile, okubaluleke kakhulu kunalokho ebesinakho ngaphambili, yingakho kungezwa leli gama phezulu. Ngaphandle kokungabaza, kuwumqondo omuhle ukukhiqiza inani elingaphezulu ngomqondo wokuphinda usebenzise kabusha futhi abaningi babona ukuthi nakho kunenzuzo.
2 Ukuhamba ngebhayisikili ngemfashini
3 Ukushova ibhayisikili kwezobuciko noma ukuhlobisa
I-Upcycling yigama elingeyona elisha, ngoba yavela eminyakeni engamashumi ayisishiyagalolunye. Kepha bekungeke kube kuze kube sekhulwini elisha leminyaka lapho leli gama lizobaluleka khona. Eminyakeni yamashumi ayisishiyagalolunye umthelela wezemvelo ubungabonakali ubaluleke kangako kepha manje sesizazi kakhulu izinkinga ezenziwa ukuthengwa kwabathengi nezinga lempilo esiliholayo emvelweni esikhathini esifushane nesikhathi eside. Kungakho kunemibono eminingi engezwa ezindleleni ezintsha zempilo ezinjenge-upcycling, emayelana nokusebenzisa indlela ye- izinto esivele sinazo ukudala okusha nokuyigugu, okuthile okudala okungasetshenziswa futhi. Yigama elibaluleke kakhulu emhlabeni wezemfashini nakwezobuciko.
Ukuhamba ngebhayisikili ngemfashini
Kukhona amafemu amaningi asevele ajoyine lo mbono omusha unomphela. Kulula ukubona amalebula kumafemu amaningi asitshela ukuthi izingubo zawo zidalwe kusuka kwezinye izindwangu ezisetshenziswe kabusha noma kwezinye izinto ezifana nengilazi noma izinto zepulasitiki. Lokhu kusenza sibone ukuthi asigcini ngokuthenga imfashini, kodwa futhi sithenga nengubo evela ezintweni ezisetshenziswe kabusha ukudala okuthile okusha nakho okubaluleke kakhulu, okwenza kube wusizo futhi. Umqondo ngemfashini ungene futhi kukhona amafemu ezentengiselwano kakhulu afana ne-H & M noma iZara afaka lolu hlobo lwengubo. Bheka izinkomba futhi uzobona ukuthi eziningi zenziwe ngezinto ezisetshenziswe kabusha, ngakho-ke uzokwazi ukuthi unakekela imvelo ngasikhathi sinye lapho uthokozela imfashini entsha.
Ukushova ibhayisikili kwezobuciko noma ukuhlobisa
Enye indawo esingathola kuyo leli gama yilelo lobuciko. Izwe lobuciko lisebenzise umthambo wokudala ukwenza izinto okusha ngezinto ezisivele zikhona isikhathi eside. Namuhla kunetemu lokuqamba lokhu futhi abaculi abaningi ngokwengeziwe banquma ukunikela ngempilo entsha ibe yizicucu nezinto zokwakha ezingalahlwa yinoma ngubani omunye umuntu. Ngenye indlela yokusebenzisa lezi zinto ngenhloso enhle, ukuvimbela ukuthi zingcolise kakhulu.
Ngokuqondene nomhlobiso, ungathola neminye imibono yaleli gama. Kukhona amalambu enziwa ngamakristalu noma izinsimbi ezenziwe kabusha kanye nezindwanguNjengoba kubonakala kwezemfashini, izindwangu zingaphinde zenziwe kabusha kusuka kwezinye izindwangu ezindala ezilahliwe. Ngale ndlela sizoba nekhaya lapho ukusetshenziswa kabusha kuzoba khona ngezindlela eziningi. Noma sijabulela ubuciko noma umhlobiso nemfashini singasiza imvelo ngasikhathi sinye futhi lolu hlobo lokuqwashisa yilokho okudingekayo namuhla.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Indlela yokuphila » Kuyini ukukhuphuka kwebhayisikili
Izinto okufanele uzenze ngemuva kokuqeqeshwa
Zonke izinkinobho zikapende wokulinganisa